Dadladii Boobka Iyo Dhac Ku Sifayda, Mucaarad Jilicsan Haday Guurtida La Laaluushay Ay Waqtiga U Kordhisay Waxa Laga Suga Dawlada Waa Raja Xumo IYO Baaba
Dadladii Boobka Iyo Dhac Ku Sifayda, Mucaarad Jilicsan Haday Guurtida La Laaluushay Ay Waqtiga U Kordhisay Waxa Laga Suga Dawlada Waa Raja Xumo IYO Baaba
Wednesday March 08, 2017 - 11:59:43 in by Samiir Cabdi
Markii Somaliland uu xukumaayay ala ha u naxariistee Madaxweyne Cigaal Distoorka isaga qoray. Kaa la qoray wuxu laha khaladaad uu ugu tala galay madaxweyne Cigal inuu isagu ka faaiidaysto oo xukunka waligii hayo. Kaasi wuxu ahaa qodobkan ah Guurtada , runtii waan ognahay marka caqlida la kaashado in dal yar oo ahaan jirey wixii loo yaqaan barigii hore ee Dawladii Somalia laba gobol oo ahWaan idin salaamay dadka shaashada maqaalka ka akhrisanayaw. Maalin walba wax kaa yaabsiiya ayaad arkaysa, tani inay dhacdo maanta iyo waxa keenay horta marka hore waxa fiican in loo fahmo. Waxana hore loo yidhi khalad hadaad keento waa khalad khalad ku sax khalad uunbuu keeni.
Waqooyi Bari iyo Waqooyi Galbeed, in laga dhigo dalka Somaliland. Aaany maamul iyo kharashba qaadi Karin Guurto iyo golayal dad badan ku jiraan.
Hadaba hadaan soo qaato meesha ay imika ka jirto caqabada oo ah Guurtada anigu waxan qaba inuu ahaa inan looba baahnayn in la sameeyo Gole g
Guurto oo dawlada ka tirsan , waxaynu ognahay odayaashii dhaqanku way joogeen haddii wax loo baahdana waa lala tashanayay markii horeba. Laakiinwaxa sida sameeyay Madaxweyne Cigaaal oo isagu si gaar ah uga faaiidaysanayay si uu xukunka ugu sii raago. Waayo odayashan waa dad aan aqoon lahayn marka wuxu doonaba way u samayn jireen, awoodii ugu sareeysay dalka sida kordhiska madaxweynaha iyaga la siiyay.
Mid kale, Marka laga hadlaayo dhaqaale iyo maamulka suaashu waxa weeye dalka Somaliland ma qaadi kara in laga dhex sameeyo Guurto ah in ku dhaw 80 qof iyo Golaha wakiilada oo ah 70, waxa inta u sii dheer 20 wasiir iyo ku xigeeno iyo 20 Agaasime? . Jawaabtu waa maya….
Waxan ognahay kharashka Mushaharka ay qaatan in uu ku baxo golahayasha aan sheegay in lagu qiyaaso in kabadan 400,000 Dollar sanadkiiba. Khasaaraha intaa leeg ee aan loo baahnayn wuxu keenaya dhaqaale xumada, iyo sicir bararka ay mar walba Somaliland ka cabato. Kaasoo ah wax soo galo dawlada iyo waxa ka baxa marka lagu daro kharashka qaadka lagaga soo iibsado Ethiopia wuxu noqonaya isna 500 Million oo Doolar sanadkiiba. Kuwaasana Sicir bararka iyo dhaqaala xumada keena.
khaladkii uu barigii Madaxweyne cigaal sameeyay baa maantana yaala oo Golaha guurtadu sidii barigii ayay wali u fadhiyaan, Madaxweyne kastaana intuu laaluushu siiyo ayuu intuu doonaba ka kordhista sida imika dhacday iyadoo uu arrinta marwalaba madax guurtada Saleeban Gaal uu arrinta fududeeyo. Bal eeg Dawladan imika wuxu xukunku kaga eka 27/7/2015 dhawr jeer bay guurtadu u kordhisay , kii ugu danbeeyay ee shalay ahaana waxay u kordhiyeen dawlada iyo golayasha ila bisha April 2019 iyagoo ku sababay Abaaro ay ilaahay ka sakaw maamul xumo sababtay.
Dhinaca kale dadka waxan u sheegya in Dawlada, sadex golaha, iyo mucaaridkuba ay ka faaiidayann kordhiska waayo qofwalba mushar ila 2000 Dollar ayuu qaato oo waqtigaa loo dheeraynaayo raali buu ka yahay. Shacab iyo dal midna u danaynayn maayan waxan ku cad taa bal eeg siday u hadlayan.
Rajadii diimuqraadiyada Somaliland way baa ba’day , waxana imika diba loo soo celiyay oo loogu daray 2 sanadood. Dawladii hantida qaranka iibsatay oo ka midyihiin 520 guri shacabka ay dawladu lahayd oo ay xaraashtay, Warshadii sibidhkii ee somaliya dhistay oo laga iibiyay ganacsade, dekedii hore ee Berbera, Women’s Club Hargeysa, Dhismihii Laanta hawada, Haamihii shidaalka iyo qaar badan oo kale. Waxana imika ugu danbeyey markii wax walba la dhameeyay in Saldhig military Emaradka la siiyo oo lacag laalusha laga qaato dabadeedna halka colaad shacabka Somaliland loogu soo hogaamiyo.
Waxan ku soo gabagabaynaya, majirto Somailand Dimuqraadiyada inta ay odayasha bilaa aqoonta ah ee laalaash cunka ay fadhiyaan golaha Guurtada. Imika ka bilaabatana raja xumo iyo boobka Dawalada uunba halkii ka socondoonta iyo Mucaarid jilicsan oo wax walba hore ugu fududeeyay inay sameeyan. Waxay ila tahay meesha Guurta iyo dawlada dalka u danaynaysa majirta waxa soo wajahay mustaqbal madaw umada Somaliland. Waxa marka haboon inay dadku tashadaan oo fadhiga ka kacaan, waxba yay nimanka madaxda ihi marka khalad kooda la qabto yaanay marba Farmaajo iyo meela kale isku qaadin.
- Aqoonyahan ka baxay jaamacado ku Norway iyo UK.
- Waa Xildhibaan deegan ee Miltonkeynes .
- Ku jira Gudiga Fulinta ee Xisbiga shaqaalaha ee Bucks.
- Wuxu ka hadalaya oo taxliila Geeska Afrika uu kaga hadlo TVga Kalsan.
- Wuxu hore u ahaa Tafatiraha Wargeyska Onkod ee UK.